[स्रष्टा संवार्ता] प्रकाशन गृहहरू सेवा गर्न भनेर खुलेका होइनन् – शितल गिरी | आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies, आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies,
नेपाली साहित्यमा शसक्त कलम चलाउने सीमित लेखक मध्येको एक नाम हो शितल गिरी । २०१३ साल फागुनमा कञ्चनपुरको बेलौरीमा जन्मिएका गिरीले रौतहटको गौरलाई स्थायी बसोवास बनाए । हाल अस्थायी रुपमा काठमाडौँमै बसोबास गरिरहेका गिरी नेपाली साहित्यका एक नक्षत्र हुन् भन्दा फरक पर्दैन । उनका महाकाली (कवितासंग्रह) २०४५, जनताकी छोरी (खण्डकाव्य) सहलेखन, पत्र मित्रता युगको आवश्यकता (निबन्धसंग्रह) २०५५, प्रसङ्गबश (निबन्धसंग्रह) २०६३, बज्जि र बज्जिका (लोकसाहित्य) २०७०, भूमिकै–भूमिकामा पर्शु प्रधान, (सम्पादन) २०७१ लगायतका कृतिहरु प्रकाशित भइसकेका छन् । तथापि...(निबन्धसंग्रह), जिवाश्म (निबन्धसंग्रह), असंख्य बूँद (निबन्धसंग्रह), र धरतीको गीत (उपन्यास) प्रकाशोन्मुख छन् । विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गर्न सफल गिरी साहित्य सम्मान र पुरस्कारको लागि मात्रै नलेखिने दाबी गर्छन् । दर्शन, प्रागइतिहास, पौरस्त्य साहित्य र संस्कृतिमा प्रशस्त ज्ञान बटुलेका गिरीको लेखन पनि यिनै विधामा केन्द्रित देखिन्छ । साहित्यलाई साधना मान्ने गिरी साधना विनाको लेखनले पठन संस्कृति र पाठकको ज्ञानमा कमी ल्याउने दाबी गर्छन् । आफूले बुझेको क्षेत्रमा खुलेर बोल्नसक्ने क्षमता भएका गिरीलाई खरो साहित्यकारको उपमा पनि दिइएको पाइन्छ । 'कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो' भन्न सक्ने खुबी राख्ने यिनै साहित्यकार गिरीसँग पेशल आचार्यले गरेको कुराकानीको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
पेशलः विदेशी भूमिमा विभिन्न साना ठूला वैदेशिक काम र भ्रमणमा जाने अनि लामो समयसम्म उतै बस्ने मानिसहरूले लेखिरहेका साहित्य (डायास्पोरा लेखन) लाई तपाईंको दृष्टिबाट कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ ? मानकतालाई ख्याल गरेर लेखिएका छन् या रहर एवम् कुण्ठा मात्र लेखिएका छन् –तिनीहरूमा ? नेपाली भूमिबाट लेखिएका र डायास्पोराबाट लेखिएका साहित्यिक कृतिमध्ये कता पट्टिबाट प्रकाशित भएका पुस्तकमा आफूलाई सन्तुष्ट पाउनु भएको छ ?
शीतलः साहित्य भनेको साहित्य हो, यो र त्यो हुनसक्दैन । क्षमता भएका, प्रतिभा भएकाले जहाँ जसरी लेखे पनि भएकै छ । सलमान रुस्दी, बंगलादेशी लेखिका तसलिमा नसरीन जहाँ जसरी बसे पनि उनीहरूले आफ्नो लेखनलाई डायस्पोरा भनेको जस्तो लाग्दैन । क्षमता भएकाले भनिरहनु पनि पर्दैन । एक त होस्टल्याण्डलाई कर्मभूमि बनाउने बित्तिकै सिर्जना गरिएको साहित्य डायस्पोरा भन्ने जुन हल्ला छ नेपालमा त्यो दुई किसिमबाट बढी प्रचारित हुन गएको छ ः १. होस्टल्याण्डमा मरी मरी कामगरी रकम जम्मा गरेकाहरूलाई फुर्काएर केही झार्ने समुह नेपालमा छ, तिनीहरूको चलखेल र अर्को २. होस्टल्याण्डमा बसेर केही कमाएका र आफ्नो नाम कमाउँन केही लेखिटोपलेकाहरूले चलाएको हल्ला । यथार्थमा होस्टल्याण्डलाई कर्मभूमि बनाएका लेखकले होमल्याण्डलाई सम्झेर होस्ट र होम–ल्याण्डको संस्कृति, प्रकृति, सुख–दुःख इत्यादि सम्झदै दुबै बीच तुलना गर्दै लेखिएको साहित्यमात्र डायस्पोरा साहित्य हो । जसले जे पायो त्यही लेखेको चाही होइन र हुन सक्दैन । राजब कै कुरा लिउ उहाँ नेपालमा बस्दा पनि साहित्य लेख्नु हुन्थ्यो, उता बस्दा पनि लेख्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरू जस्ता केहीमा प्रतिभा छ, साहित्य लेख्नु हुन्छ यहाँ बस्दा र उहाँ बस्दाको कुरा नै आउँदैन । आफूले भोगेको देखेको यथार्थ साहित्यमा आउँने हो, उताको भोगाई यताको भन्दा अवश्य फरक छ, अनि साहित्य लेखनमा अलि फरकपन आउँछ, यो फरक पन नै नेपालमा हल्ला गर्ने जमातले भने जस्तो डायस्पोरा भने होइन ।
पेशलः नेपालका रहेका वा चलेका साहित्यिक गुट, उपगुटहरूलाई तपाईं कुन रूपमा लिनुहुन्छ ? कसरी ?
शीतलः गुट उपगुटहरूले केहीको चाहना त पुरा हुन सक्छ, भइरहेको पनि छ । तर यसले समग्रमा नेपाली साहित्यलाई भने हानी नै पुर्याएको छ ।
पेशलः नेपालमा अहिले कागजका खोस्टामा सीमित रहेका तथाकथित नेपाली साहित्यिक संस्थाहरू र पुरस्कार लेनदेनमा गनाएका त्यस्ता संस्थाहरूले एउटा ऊर्जाशील क्षमतावान् लेखकलाई साहित्य लेख्नका लागि के भरथेग गर्न सक्ने स्थिति छ ?
शीतलः पसल थापेका छन्, सबैको पसल चल्छ नै भन्न सकिदैन । राम्रो चाकरी गर्न सक्ने, पावर र मसल भएकाहरूको पसल चलेको जस्तो देखिन्छ । जो यथार्थमा साहित्यकार हो, उसले आफ्नो धर्म बुझेको हुन्छ, उसमा भएको ऊर्जा र क्षमता अनुसार लेखिरहन्छ । पुरस्कारको पछि पर्दैन । तथाकथित संस्थाले वितरण गरेका पुरस्कार प्राप्त लेखक पनि देखिएकै छ । तिनीहरूको लेखकीय क्षमता पनि थाहा छ । यतिमात्र होइन वर्षमा एक पटक हुने कविता महोत्सवमा हुँदै आएको नाटक पनि हेरिएकै छ । कतिपय प्रथम बनाइएका या बियरको खोलो बगाएर भएकाहरू छाती खोलेर म प्रथम भएँ भन्न सकिरहेका छैनन् । देखिएकै कुरा हो । यस बारे अरु केही नभनुँ ।
पेशलः सहरमुखी र विज्ञापनमुखी प्रकाशन गृहहरू अहिलेको नेपाली पुस्तक बजारमा जसरी आएका छन् त्यो प्रवृत्ति विश्लेषणको अलि लामै र छुट्टै पाटो भएको छ । तर उनीहरूको जो आक्रामक उपस्थितिले साहित्य लेखनका लागि लेखकलाई र पठनका लागि पाठकलाई कस्तो दिशानिर्देश गर्दै कतातिर लैजाँदै छन् कस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
शीतलः प्रकाशन गृहहरू सेवा गर्न भनेर खुलेका होइनन् । आफ्नो लगानी कसरी उठाउन सकिन्छ मात्र यति सोच्छन्, उनीहरूले व्यापारिक धर्म यही नै हो भन्ठानेका छन् । संसारका अन्य ठाउँमा पनि यस्तो भएको थियो र छदैछ । त्यस्ता प्रकाशनले छापेका विदेशी अनुवाद पुस्तक तपाईंले हेर्नुभयो भने त्यसमा शुद्धता त हुदैन नै साथै अधुरो, अपुरो रहेको पाउनु हुनेछ । द्रव्य पिपाशु प्रकाशकबाट साहित्यलाई मजाक बनाएको यो भन्दा अर्को के उदाहरण हुन सक्छ ? हल्लाको भरमा नाम बिकाउछन् र साहित्यको मजाक बनाउँछन् । यस्तो कार्यले गम्भीर साहित्य र यसका पाठकलाई कुनै फरक पार्दैन, तर पठन संस्कृतिमा भने नराम्रो प्रभाव पार्छ । राम्रा पुस्तकको नाममा धेरैको खल्ती रित्याउने काम त्यस्ता प्रकाशकबाट हुदैछ । यस्तोले पठन संस्कृतिमा नकारात्मक असर त अवश्य पर्छ । तर रोक्ने कस्ले, किनभने अहिले संक्रमणकालीन अवस्था छ, त्यसबाट साहित्यको क्षेत्र पनि अछुतो छैन, कुरा यति मात्र हो ।
पेशलः भाडामा पनि लेखकहरू राखेर नेपाली साहित्यमा आत्मकथा साहित्य लेखाउने चलन यो दशकमा नेपालमा प्रशस्तै देखियो । केही गैर साहित्यिक व्यक्तिका किताबहरू पनि निकै बिके । चर्चित र विवादास्पद पनि भए । के यो प्रवृत्तिले मौलिक लेखनको प्रवृत्तिलाई मार्दैन र ? संसारको अवस्था र हाम्रो अवस्था यो प्रश्नमा कहाँनेर मिल्छ ? कहाँनेर मिल्दैन ?
शीतलः यो चलन नेपालको मात्र हैन, नेपालमा त धेरै पछि आएको न हो । सम्पादन गर्ने क्षमता भएका जो सिर्जनामा दरो उत्तीर्ण हुन सक्दैनन्, उनीहरूबाट भाडाका लेखिने काम हुन्छ । लेख्न लगाउनेले पारिश्रमिक दिन्छ, आत्मकथा लेखाउनेको पनि इच्छा पुरा हुन्छ, अर्कोतिर प्रेसले पनि काम पाउँछ । यस्तो लेखनलाई मैले त स्वभाविक रूपमा लिएको छु । मूर्तिकारबाट कसैले आफ्नो मूर्ति बनाउँन पाउँछ भने आफ्नो जीवनी आफूले भने अनुसार सम्पादन गराएर लेखाउन किन न पाउँने । कस्तो किताब बिक्ने कस्तो किताब नबिक्ने भन्ने कुरा पाठकलाई आकर्षित गर्नसक्ने क्षमता कुनमा कतिको छ त्यसमा निर्भर गर्दछ । खासगरी यौन, राजनीति र धर्म यी तीन कुरा बढी बिकिरहेका छन्, बिरोध गर्नेले जति विरोध गरे पनि यो यथार्थ हो । किनभने यस्ता किताबले पाठकको जिज्ञासा पुरा गर्न नसके पनि उत्सुकता भने जगाएको अवश्य हुन्छ । पाठक जहिले पनि फरकपन चाहन्छ, दमदार चाहन्छ । यस्तो लेखन प्रवृत्तिले मौलिक लेखन प्रवृत्तिलाई मार्न सक्दैन । यदि मौलिक लेखनमा दम छ भने केही समय पछाडिपरेको जस्तो देखिएला तर टिक्छ । साहित्य भनेर लेखिएका सम्पूर्ण कृति गतिलै छन् भनेर म भन्दिन । प्रेसलाई काम दिनुलाई नै साहित्य हो भनेर मान्ने पक्षमा म छैन । धेरै मान्छेले राम्रो भनिदिएपछि नराम्रो कुरा पनि राम्रो मानिने र धेरै मान्छेले राम्रो नभनिदिएपछि राम्रो कुरा पनि नराम्रो मानिने प्रचलन पहिले पनि थियो, अहिले पनि छँदैछ । साहित्य भनेको कलाकै रूप हो । कलात्मक भएको हुँदा ५÷६ हजार वर्ष पहिलेको गायत्री छन्दको सावित्री मन्त्र (जसलाई गायत्री मन्त्र भनिन्छ हिजोआज) अहिले पनि प्रचलनमा छ । महाकवि कालिदासको मेघदूतको चर्चा चलेकै छ अझै पनि, कुनै उदाहरण दिन पर्यो भने मुनामदनको पङ्क्ति अघि सार्छौँ हामी नै । तपाईं नै सोच्नुस् मुनामदनबाट उदाहरण दिनमिल्ने १५÷२० पङ्क्ति निकालीदियौँ भने के नै बच्छ र ? हो त्यस्तो एक पङ्क्ति पनि रच्न नसक्ने टिक्दैन, उनीहरूले भर्खरै लेखेको रचना पनि क्षमताको आधारमा पुरानो हो र रद्धिको टोकरीमा थन्किन्छ । साहित्यले साधना खोज्छ, साहित्यमा बस्तुको अत्यधिक सुन्दर, प्रभावोत्पादक तथा प्रभावशाली कथन पद्वति भने हुनै पर्दछ, साहित्यको महत्त्व यसैमा छ ।
पेशलः नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्यको दाँजोमा कहाँनेर पाउनुहुन्छ ? या नेपाली साहित्य विदेशी साहित्यको दाँजोमा तुलना गर्नै नसकिने स्थितिमा रहेको छ । अलि दिल खोलेर भनिदिनुहोस् न ?
शीतलः जसरी भारतीय साहित्य, रसियन साहित्य, अमेरिकन साहित्य तत् तत् भाषाका साहित्य त्यस भाषाको मात्रै साहित्य होइनन् विश्व साहित्यकै अङ्ग हो, त्यसैगरी नेपाली साहित्य पनि नेपालकै मात्र साहित्य नभएर विश्वकै साहित्य हो, विश्व साहित्य हो । प्रत्येकको आफ्नो पन हुन्छ, आफ्नो पन बोकेका वास्तविक साहित्यलाई दाज्ने मापो बनेको जस्तो मलाई लाग्दैन । कृतिको स्तर निर्धारणका पक्षहरू अनेक हुन्छन् । पाठकले के कस्तो मन पराउँछ र समालोचकले के कस्तो मूल्याङ्कन गर्छ ती कुराले पनि कृतिको स्तर र प्रभावलाई निर्धारण गर्ने गरेको छ । रचनाको प्रभाव कसमा कस्तो पर्छ भन्न सकिन्न । एउटै रचना कसैलाई राम्रो लाग्न सक्छ, कसैलाई नराम्रो लाग्न सक्छ । कृति पढ्दाको पाठकको अनुभव पनि फरक–फरक रहँदै आएको छ । लेखकको बुझाइ जे हो त्यो पाठकमा नरहन सक्छ । लेखकको उद्देश्य जे हो त्यसभन्दा भिन्न उद्देश्य पाठकमा उत्पन्न हुन सक्छ । लेखकलाई नराम्रो लागेको पाठकलाई राम्रो लाग्न सक्छ ।
हो हामी एउटा कुरामा भने सारै गरिब छौँ, त्यो हो हाम्रो आफ्नो पन भएको राम्रो साहित्य विदेशकाले सहजै बुझ्न र पाउन सक्ने गरी उपलब्ध गराउन भने सकेका छैनौँ । यो हाम्रो कमजोरी पनि हो, यो कमजोरीको कारण मैले देखे अनुसार यस्तो रहेको छ ः १. हामी कहाँ सुसम्पन्न प्रकाशनगृहको अभाव छ । २. असल कृति चयनकर्ताको खडेरी नै छ । ३. हामीले विश्वव्यापी प्रचार÷प्रसार अभियान अहिलेसम्म चलाउन सकेका छैनौं । ४. इन्टरनेटमा राम्रो पहुँच असल कृतिले पाउन सकेको छैन । ५. सबभन्दा ठूलो कुरा त सुयोग्य अनुवादकको अभाव नै हो ।
पेशलः नेपाली साहित्यलाई अनुवाद गरेर विश्व स्तरमा लैजान किन सरकारी र गैरसरकारी तहबाट यस्तो उदासिनता देखाइएको होला ?
शीतलः जसले साहित्यलाई अनुत्पादक ठान्छ त्यस्ताबाट के आश गर्न सकिन्छ, हाम्रो सरकार यस्तै छ । साहित्य बुझेकाहरूको जमात सरकारमा पुगेपछि अवश्य उदासिनता हटेर जानेछ । जुन देशको सरकार नै त्यस्तो छ भने, गैरसरकारी संस्थासँग के आशा गर्नु, खै ।
पेशलः नेपालमा सानाठूला सबै खाले लेखकले लेखेर बाँच्न पाउनका लागि पठन संस्कृति (बुक कल्चर) को बढावा, बजार सुव्यवस्थापन र ग्रामीण क्षेत्रमा पुस्तकको व्यापक बिक्री वितरण एवम् देशैभरि पुस्तकालय संस्कृतिको जनजागरण गर्न अबेला भइसकेन र ?
शीतलः अबेला त नेपालमा धेरै कुराको भइसकेको छ । राज्यले नेपाली लेखकका राम्रा राम्रा पुस्तकहरू निश्चित प्रति किनेर देशभरीका जनताले सहजै पढ्न पाउने गरी पुस्तकालयको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो चलन धेरै मुलुकमा छ । यतिमात्र होइन राम्रा पुस्तक प्रकाशन गर्ने गृह पनि राज्यले स्थापना गरी संरक्षण गर्नु पर्ने हो । कुकुर र बिराला जस्ता स्वभावका हाम्रा राजनेताबाट सम्भव होला जस्तो मलाई त लागेको छैन । जनताको होइन आफ्नो आवश्यकता मात्र हेर्न थालेको हुँदा नै नेपाली भाषा र संंस्कृति पछाडि परेको हो । यस्तोमा लेखेर बाँच्ने संस्कृति भनेको त निकै टाढाको कुरा भयो । हो केही उत्साही घोष्ट राइटिङको भरमा जेनतेन बाँची रहेका भने छन्, म ती परिश्रमीलाई सलाम भन्छु ।
पेशलः तपाईंका सन्तानहरू पनि साहित्य लेख्छन् ? या लेखनलाई कुन रूपले हेर्छन् ? सापेक्ष या निरपेक्ष ? बाल साहित्यका पुस्तक तिनीहरू कुनकुन भाषाका कत्तिको मात्रामा पढ्छन् ? घरमा रिडिङ कल्चरलाई तपाईंले कत्तिको स्थान दिनु भएको छ ?
शीतलः साहित्य लेख्दैनन् । आख्यानका र निबन्धका पुस्तक थोर बहुत पढ्ने गर्छन् । घरमा साहित्य प्रतिको लगाव मेरो छ । मसँग थोरै भएपनि पुस्तकहरूको संग्रह छ । दर्शन, प्रागइतिहास, पौरस्त्य साहित्य र संस्कृतिका धेरै त नभनौ मलाई चाहिनेजति मेरो संग्रहमा छ । यीदेखि बाहेक पनि केही छन् । संग्रहमात्र हैन नियमित अध्ययन पनि गर्ने गर्छु । यो मेरो कुरा भो, घरका मानिसको यस प्रति रुचि छैन, तपाईंले भन्नु भएजस्तो रिडिङ कल्चर बन्न सकेको छैन । मधेश आन्दोलनले आफ्नो थात थलो छाड्नु परेको म जस्तो, बिरालाले झैँ यता र उता डेरा सरी रहनु पर्नेले कति नै ध्यान दिन सक्छु र ।
पेशलः घर परिवारबाट तपाईंको लेखनलाई कत्तिको सपोर्ट मिलेको छ ? आफ्नो पेसा या व्यवसायले तपाईंलाई लेखनमा कत्तिको ऊर्जा मिल्ने गर्छ ? सकारात्मक या नकारात्मक रूपमा ?
शीतलः घर परिवार, जीवनसंगिनी कमला गिरीबाट मैले सहयोग नपाएको भए, आज म यो स्थानमा कदापि आउन सक्दिन थिएँ । घर, व्यवहार धान्ने र मलाई भेट्न आउने साहित्यकार, अनुसन्धातालाई आफ्नो व्यवहारले मन जित्नसकेको हुँदा नै म हृदय खोलेर यस क्षेत्रमा लाग्न पाएको हुँ । म हिजो जागिरे थिएँ, त्यो पनि ग्रामीण भेग चाहर्ने, गा.वि.स.सचिव— हो मेरो पेसाले जहाँ जहाँ पुर्यायो, त्यहाँको बारेमा समग्र अध्ययन गर्न पाएँ, लोकवार्ता लेखन भनेको मैले जागिरको क्रममा प्राप्त गरेको त्यही ऊर्जाको परिणाम हो । मैले आफ्नो पेशालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।
पेशलः नेपाली पत्रपत्रिकाहरूको स्थिति समग्रमा कस्तो रहेको पाउनु हुन्छ ? सम्पादन कलामा नेपालका साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादकहरू कत्तिको बेमिसाल रहेका छन् ? तिनीहरू प्रतिभालाई चिनेर कत्तिको मद्दत गर्दछन् ? साथै स्वयम्सेवी रूपमा उपलब्ध गराएका रचनाले नेपाली साहित्यको धरोहरलाई अब थाम्छ ? कि पैसा दिएरै रचना लेखाउनु पर्ने युग आइसक्यो साहित्यिक पत्रिकाहरूले पनि ?
शीतलः नेपाली पत्रपत्रिकाको स्थिति समग्रमा अझसम्म व्यवसायिक बन्न सकेको छैन । यसो हुँदा राम्रो त भन्न सकिन्न । सम्पादन भनेको एउटा कला हो । यो कला र सम्पादकिय क्षमताको अभाव धेरैमा रहेको छ । आदर गर्न योग्य सम्पादक नभएका होइनन्, हुनुहुन्छ तर एकदम कम । धेरै साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादकमा गजल र फजल छुट्याउन सक्ने क्षमता नै छैन, मुक्तक र रुवाईको फरक चिन्दैनन् । यात्रा–संस्मरण–नियात्राबारे जानकारी राख्दैनन् । कतिसम्म भने निबन्ध र कथा नै छुट्याउँन सक्दैनन् । यो मेरै रचनामा पनि भएको पाएको छु । म नाम चाहि कसैको लिन्न कुन पत्रिकाको हो भनेर । लेखकलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने सोचको विकाश नेपालमा हुन सकेको छैन । यसकारण पनि राम्रा लेखकका रचना र राम्रा रचना थोरै पत्रिकामा मात्र पढ्न पाइन्छ । सम्पादकमा खासगरी रचनालाई हैन लेखकलाई हेर्ने दृष्टिकोण जबसम्म बाँचिरहन्छ तबसम्म कायापलट होलाजस्तो लाग्दैन । एकातिर साहित्यिक पत्रिका भनेपछि एक दुईको कुरा छाडौं किनेर पढ्ने संस्कृति बनिसकेको छैन । गुजारा चलाउँने प्रवृत्ति हावी हुँदा स्थीति दयनिय छ । नीजिस्तरमा एउटा बलियो पत्रिका चलाउन सक्ने प्रकाशनको नितान्त खाँचो छ । हिजो अलिकति भने पनि गरिमाले धानेको थियो, तर आज त त्यो पनि छैन । वितरण सहज र सर्वसुलभ हुन सक्ने हो भने नेपालमा एउटा राम्रो पत्रिका मजाले चल्न सक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ । बरु केही दैनिक पत्रिकाले राम्रा साहित्य पस्किने गरेको पाएको छु । लेखकलाई पारिश्रमिक पनि दिन्छन् । साहित्यिक पत्रिका रचना भीख मागेर चल्नु हुदैन र चल्न पनि सक्दैन ।
पेशलः लेखक नभएको भए तपाईं यो जुनीमा अरू के बन्न चाहनुहुन्थ्यो ? लेखन गरेरै तपाईंको अन्तर्रात्माले शान्ति पाएको छ त ? कि पछुतो त मानिरहनु भएको छैन ?
शीतलः लेखक नभएको भए म चित्रकार बन्थेँ । भावनाले व्यक्त हुने बाटो खोज्छ । सबभन्दा ठुलो कुरा त साधना हो । म साधना गर्न डराउन्न । यसकारण आफूले अपनाएको या हिडेको बाटोमा पछुताएको छैन । पछुताउदिन पनि ।
पेशलः पुरस्कृत भएका नेपाली साहित्यका पुस्तकहरूका बारेमा तपाईंको आफ्नो मौलिक धारणा चाहिँ के रहेको छ ? पाउनै पर्ने पुस्तकले पुरस्कार पाएका छन् या भित्री चलखेलका आधारमा पुरस्कार पाएका छन् ?
शीतलः प्रत्येक व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमता र विधि आ–आफ्नै हुन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताको मूल्याङ्कन सबैको नजरमा उचित ठहरिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन । हो तपाईंले संकेत गर्न खोज्नु भएजस्तो पक्षपात नभएको पनि होइन । भित्री चलखेल प्रसस्त भएका छन्, भित्री चलखेलकै आधारमा पुरस्कार पाएका पनि छन् । मुख्य कुरो त सबभन्दा ठूलो मूल्याङ्कनकर्ता भनेको पाठक हो । पाठकको मूल्याङ्कन नै खरो र दरो हुन्छ । पुरस्कार प्राप्त सबै कृति 'माधवी' हुन सक्दैन । पुरस्कार नपाए पनि 'प्रेतकल्प' को गरिमा घटेको छैन ।
पेशलः अन्त्यमा, लेखनमा आउन लागेका नयाँ लेखकहरूलाई व्यवहारिक र के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ?
शीतलः मैले भन्न पर्ने कुरो एउटै हो । जुनसुकै कुरामा सफल बन्नको लागि साधनाको आवश्यकता पर्छ । एकाग्र भएर साधना गर्नै पर्ने हुन्छ । लेखनमा त झन् धेरै अध्ययनको आवश्यकता पर्छ । लहडको भरमा लेख्नु भन्दा नलेखेकै बेस ।
पेशलः मैले सोध्न छुटाएका र यहाँले भन्न खोज्नु भएका केही कुराहरू छन् ?
शीतलः राम्रा र गहकिला प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद । यहाँको लक्ष्य पुरा होस् शुभकामना ।
वार्ताकारः पेशल आचार्य
हालः मन्थली सहिद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस, मन्थली । E-mail: espeshal2023@gmail.com